शिक्षा Archives - Page3of6- Limbuwan khabar
आज धुमधामसँग सरस्वतीको पूजा, बसन्त ऋतु प्रारम्भ
दमक । आज माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने हिन्दु परम्परा अनुसार ‘श्रीपञ्चमी’ पर्व मानिन्छ । त्यसैगरी विशेष गरेर स्कुलहरुमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ । आजबाट सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो भएको...
साझा प्रकाशन अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा विजयी
काठमाडौँ। साझा प्रकाशनको २४औँ साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा विजयी भएका छन् । नेकपा नेता एवं साहित्यकार डा. सुब्बाले ४१२ मत प्राप्त गरेका थिए । उनको डा. जीवनचन्द्र कोइरालाले भने १८३ मत मात्र...
दमक। दमक क्षेत्रका सामुदायिक बिद्यालयहरुमा देखिएका समस्याको बारेमा मंगलवार नेपाली काङ्ग्रेस दमक नगर समितिले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लामो समयदेखि दमकको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको छ तर स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको...
दमकको पृथ्वी माविमा लिम्बु भाषा शिक्षक छनौट
दमक। झापा दमकको पृथ्वी माविमा लिम्बु भाषा शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको छ । नगरपालिका वडा नंं. ७ मा रहेको पृथ्वी माविमा लिम्बु भाषा शिक्षक नगरपालिकाले करारमा नियूक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षक छनौट गरिएको हो ।...
माङसेबुङमा बाली विज्ञान पढाई शुरु
माङसेबुङ/ इलामको माङ्सेबुङमा बाली विज्ञानको पढाइ सुरु भएको छ । माङ्सेबुङको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कक्षा ९ मा बाली विज्ञान विषयको अध्ययन सुरु भएको हो । कक्षा ९ मा यसै वर्षदेखि औपचारिक रूपमा पठनपाठन सुरु गरेको...